Adoo 25 jir ah milkiile shirkadeed sideed ku noqon kartaa? – XOGMAAL.COM
Adoo 25 jir ah milkiile shirkadeed sideed ku noqon kartaa?
By Soomaaliya	 Last updated Nov 1, 2018
Dadka intooda badan waxay doonayaan iney billaabaan shaqa iyaga u gaar ah taasoo ah billowga ugu horreeya uu qofku wax ku sameyn karo oo ah inuu ku hamiyo.
Waxaana loo baahan yahay inuu qofku marka uu rabo inuu ganacsi uu isagu leeyahy abuuro uu maskaxda ku hayo suuqa iyo lacagta uu wax ku billaabi lahaa.
Balse ntiijada ka soo baxday tirakoob dhalinyarada shaqa abuurka sameeysay lagu sameeyey ayaa waxay tilmameysaa tirada dadka ugu badan oo ay da’dooda u dhaxeysa 16-24 jir iney door bidayaan iney iyaga iisu shaqeeyaan oo ay wax u gaar ah sameeysataan tirdaasi oo laba jibbaarantay wixii ka dambeeyey 2001-da.
Sanadkii 2016-kii 181,000 oo dhalinyaro da’daasi ah ayaa lagu tilmaamay iney yihiin kuwa naftooda iisu shaqaaleeyey.
Balse runta meesha talla ee aan laga been sheegi karin ayaa waxay tahay dad aad u badan iney ku guul darreystaan wixi ay sameeyeen seddex meelood dadkaasi shaqooyinka abuurtay ganacsigooda seddex sano ma gaarin oo waa uu baaba’ay, sida ay sheegtay daraasad ay amuurtan ka sameeysay xaruunta cilmaadhista shirkadaha yaryar.
Laga soo billaabo kuwa allifa barnaamijyada komputerrada ilaa iyo kuwa rootiga duba Newsbeat waxy dhalinyarada da’da yar ee shaqooyinka abuurtay ay weydiisay waxyaabaha ku dhiirriyey iney hal abuur ganacsi ku dhaqaaqaan.
‘Arrinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay ku dhaqaaq waxa aad sameyn rabtid’
Adam Cali oo 21 jir ah wuxuu sheegayaa inuu billaabay shirkad u gaar ah maxaa yeelay ma dooneyn inuu qof u shaqeeyo.
Wuxuuna Newsbeat uu u sheegay “in shaqooyin badan oo uu dalbaday loo diiday, marwalba wuxuu aaminsanaa inuu wax weyn qaban karo, wax weyn inuu iskii u qaban karana wuu ogaa.
Adam wuxuu ka qayb qaatay shabkad uu gacanta ku hayo sanduuqa Den star Peter Jones.
Sanduuqa Peter Jones waa sanduuq samafal ah oo dadka ganacsiga cusub sameeysanaya tababarro dhinaca ganacsiga ah ayuu siiyaa.
Adam wuxuu soo bandhigay fikirkiisa gancsi wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta sanadka dadka gancsiga abuurta la siiyo wuxuuna helay £5,000 oo gini iyo inuu jaamacadda uu lacag la’aan uu kaga barto cilmiga gancsiga.
Adam wuxuu leeyahay “haddii aad leedahay fikir cusub iyo hami wada socdo arrinta ugu wanaagsan waa iney ahaataa inaad ku dhaqaaqdo oo aad ka labalbeyn”
“Haddii aad dooneyso inaad wax baratidna, wakhti ha iska lumin orod oo baro sababta oo ah waxaa nagu hareereysan dad badan oo wanaaggeenna jecel” ayuu leeyahay.
Lacagtuna waa muhiim
Haddii aad nasiib leedahay waxaa laga yaabaa iney qoyskaagu yihiin kuwa awood dhaqaale leh oo lacag kuugu caawin karo, balse haddii ay taa kuu suuragelin waa inaad dowladda ka heshaa lacag amaah ah oo aad shaqada ku billaabato.
Ilaa iyo 2012-ka dhalinyarda shaqa abuurka sameeyey oo ay da’doodu u dhaxeyso 18-24 jir waxaa la amaahiyey £54 milyan oo gini.
Vittoria Capaldi, waa gabar 20 jir ah marki ay ganacsigeeda yar billaabeysay “dowladda iney wax ka amaahato iskuma dayin” bangi ama cid kale oo wax amaahiso uma tagin”.
Waxay iyadu deyn toos ah oo ay ku billaawdo ganacsigeeda rootiga ka dalbatay shirkadda Galsgow sanadka marka uu ahaa 2014-ka.
Dhammaadka Instagram daabacaadda qore honeybeebakeryglasgow
Vittoria waxay mudda shan bilood ah ku amaahatay £20,000 oo gini.
Lacagtaasi oo ay ku soo amaahatay qalabka rootiga ay ku dubi lahayd, qurxinta goobta ay ku iibin lahayd iyo dayactirka kale uu qlabku u baahnaa waxayna gancsiga rootiga ka billaawday bariga Dunbartonshire.
Waxayna sheegeysaa “iney dadka xiriirka tooska ah la leh shaqada aad qabaneysid aad amaah ka qaadato ay wanaagsan tahay maadaamaa ay qorshahaaga ganacsi ay iyagu si fudud u fahmayaan.”
Sida oo kalana waxaa jira hay’ado dowli ah oo taageero dhinacya badan oo ay la talinta ka mid tahay dhalinyarada da’da yar ee hal abuurka sameeya.
Ganacsatada waaweyn taageero ka hel
Ashleigh Plummer oo 25 jir ah wuxuu abuuray barnamij Kombiyuutar oo ciyaaraha isboortiga la xiriiro balse wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo dhinaca suuq gelinta.
Wuxuuna codsigiisa uu u gudbiyey shabakadda Gymshark oo ku yaalla Birmingham, wuxuuna ka dalbaday iney siiyaan boos bannaan uu hal abuurkiisa ku soo bandhigo iyo tababarra xirfaddiisa uu ku kobciyo.
Shabakaddan ayaa waxaa hoos taga in ka badan 180 shirkadood oo ganacsiga dhinaca teknoolojiyadaha casriga ah shirkadahaasi shabakadda hoos tago oo ay ka mid yihiin Tata, Barclays, iwm…
Dalka Ingiriiska oo keli ah waxaa ka jira 38 Shabakadood oo kobcinta awoodda shirkadaha yaryar loogu talagalay.
Waxayna shabakadahaasi ka shaqeeyaan iney gancsiyada yaryarka ee billowga ah ay xagga dhaqaalaha iyo tabbarradaba ay ka caawiyaan.
Ashleigh wuxuu leeyahay “waxaa aniga halkan i soo gaarsiiyey Shabakadda Gymshark maadaamaa aan jeclaa inaan la shaqeeyo.”
Saaxibbadaa, eheladada iyo asxaabtaada ka dalbo iney ka qayb qaataan hal abuurkaaga
Inta badan ganacsiyada billowga ah waxay dhaqaalaha ugu badan ay ka helaan asxabtooda iyo eheladodda.
Akshay Ruparelia waa 18 jir wuxuu shirkadda Doorsteps.co.uk uu billaabay laba sana ka hor wuxuuna mahad ballaadhan uu u hayaa eheladiisa deynta lacageed ee ay siiyeen si uu shaqada ugu billaabo.
Horraantii sanadkanna wuxuu billaabay bog uu dhaqaale ugu uruurinayo shirkaddiisa si uu ugu hormariyo.
Dhaqaalaha shirkaddiisuna waxay hadda gaartay £18 milyan oo gini
Akshey wuxuu leeyahay macamiisha iyo shaqaalahaba waxay jecel yihiin iney shirkadda dhaqaale ku darsadaan madamaa ay shirkadda aaminsan yihiin iney faa’ido u keeneyso.
Wuxuuna intaa ku daray “iney dadku diyaar u yihiin iney isbeddelka socda qayb ka noqdaan”
Qarax ayaa lala eegtay Shaqaalaha Xabsiga dowlada ee caasimadda ku yaalla
Sawirro:- Farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda dhaqan gelinta heshiiska nabadda Koonfurta Suudaan